Umuthi 'Kvadevit ": yokusetshenziswa, incazelo, ukubuyekezwa
abakhiqizi Modern kwemithi ekhiqizwa eziningi ezahlukene multivitamin izakhiwo. Lezi zimali ahlose ukwenza i kwamaphutha yokudla okunempilo emzimbeni, sandla ngcono umsebenzi zonke izinhlaka zayo kanye izinhlelo.
Yikuphi eziyinkimbinkimbi multivitamin iyona engcono kakhulu? Lo mbuzo uvame wezwa kuphuma emlonyeni iziguli. Odokotela abaningi batusa ithuluzi ezifana "Kvadevit". Manual, incazelo, ukubuyekezwa mayelana izidakamizwa, izici zayo futhi izakhiwo kuchazwe lapha ngezansi.
Ukwakheka izidakamizwa, incazelo yalo, Ukwakheka kanye Okufakiwe
Ngayiphi ifomu ikhiqizwa multivitamin eziyinkimbinkimbi "Kvadevit"? Imiyalelo, incazelo lomuthi libike ukuthi ukudayiswa kwalezi izidakamizwa iza amaphilisi, camera jacket ophuzi.
izindlela kubhekwe siqukethe izinto ezilandelayo:
pyridoxine hydrochloride ;
hydrochloride thiamine ;
Izidakamizwa "Kvadevit" imfundo okuyinto eziqukethwe amabhokisi iphepha, uya edayiswa amabhamuza.
Liyini ikhambi njengoba "Kvadevit"? Imiyalelo isicelo zokubuyiselwa, kuba ukulungiselela eziyinkimbinkimbi, equkethe ezihlukahlukene amaminerali namavithamini. Ziyakwazi izingxenye ezibalulekile zonke izinqubo umzimba okwenzeka emzimbeni. Umthamo amavithamini namaminerali ngamunye Izithako eduze ngangokunokwenzeka kuya nsuku zonke izidingo bokuphila yomuntu.
Izakhiwo amathuluzi eziyinkimbinkimbi
Yini ebangela kahle "Kvadevit" izidakamizwa? Iziyalezo yokusetshenziswa uthi leli thuluzi iqukethe izinto ezibalulekile. Cabanga izakhiwo zabo manje.
Vitamin A ehilelekile synthesis izingxenye zesakhiwo amaprotheni izicubu kanye enzyme. Kudingeka ukuze amathambo ekwakhekeni, amaseli EPITHELIAL futhi synthesis rhodopsin. Futhi uvithamini A igcina immunoglobulin zamagama, ikhuthaza division immunokomponentnyh amaseli bese ivikela umzimba ezifweni ezihlukahlukene.
Vitamin B1 - kuyinto coenzyme ebalulekile umzimba carbohydrate. Uhlanganyela umsebenzi isimiso sezinzwa.
Vitamin E - antioxidant bokuphila evikela ulwelwesi cell ekulimaleni futhi ashukumise amaprotheni synthesis heme.
Vitamin B12 - isici sokukhula. Kubalulekile ngenqubo evamile igazi kwetinhlavu kanye nokuvuthwa kwamangqamuzana egazi abomvu. Futhi, into ehilelekile synthesis myelin, acid nucleic futhi ama-amino acid.
Vitamin B2 kuyingxenye ebalulekile flavin coenzymes ezifana flavin adenine ihambisane dinucleotide futhi flavin mononucleotide. Bangabaholi yelikhono for emishinini yokuphefumula yeselula inqubo iqhaza namachibi nokwehlisa ukusabela.
B6 ehilelekile umzimba amino acid, neurotransmitters futhi athwala umoya-mpilo.
Nicotinamide kuyinto ingxenye yesigaba sokubhekela izimo cofactor NADP (H) kanye nad (H). He is ahileleke izicubu kwezimila izinqubo, lipid kanye carbohydrate umzimba.
Folic acid Akhuthaza ukwakheka kwe-amangqamuzana avamile igazi. Bekanye vitamin B12, kukhuthaza erythropoiesis ehilelekile umzimba choline, kanye nucleic acid acid acid zamagama.
U-vitamin C kuyadingeka ukuze kwakhiwe nokukhula amazinyo, amathambo, isikhumba, capillary endothelial, kanye ukusebenza evamile omzimba futhi ethukile.
Rutin kunciphisa fragility futhi permeability ka-capillary futhi kuvimbela isenzo hyaluronidase.
Ithusi okuthiwa izakhi mkhondo kubalulekile, okuyinto ohilelekile yensimbi umzimba, reticulocytes yokuvuthwa, i-hemoglobin zamagama nezinqubo Anabolic.
Calcium pantothenate iyadingeka ukuze acetylcholine zamagama kanye ATP, ukuhlinzwa evamile ye tricarboxylic acid umjikelezo, ukukhiqizwa kwamasosha omzimba futhi hormone, kanye kusukela emathunjini ukugaya ushukela egazini, i-potassium ion, vitamin E, kanye nabanye.
Potassium ehilelekile electrolyte umzimba futhi izinzwa ngiyibona yokudlulisela.
Glutamic acid ikhuthaza ukukhululwa kanye neutralization ammonia ikhuthaza nokudluliswa excitation ku synapse futhi ehilelekile izinqubo umzimba.
Phytin kuyinto ekhuthaza eziyinkimbinkimbi phosphorus equkethe nenye magnesium calcium. It sithuthukisa ukuthuthukiswa kanye nokukhula ithambo izicubu, ngcono ukusebenza isimiso sezinzwa futhi kuvusa kumiswa igazi.
Methionine ubhekwa kubalulekile amino acid. It is kwadingeka kwezinhlelo nitrogen ibhalansi nokukhula umzimba, ohilelekile izinqubo kanye transsulfuration peremetilirovaniya, kuvimbela okunamafutha isibindi.
Yibuphi ubufakazi ukulungiselela eziyinkimbinkimbi "Kvadevit"? Yokusetshenziswa, ukubuyekezwa ukubika ukuthi sisetshenziswa:
ukuhlangabezana umzimba udinga amaminerali namavithamini ngesikhathi ukululama ngemva ukuhlinza, izifo ezingathi sína, ukucindezeleka, ukuhlukumezeka, ngelashwa nangemithi futhi ukwelashwa ngemisebe;
kuncike indlela yokudla ehambisana nempilo ekhethekile;
at izidingo ephakeme umzimba amaminerali namavithamini ngenxa ekudleni;
ukungabekezelelani kunoma ukudla;
ukwandisa ukumelana Imininingwane umzimba;
yokuthuthukisa ngokomzimba futhi izinga lempilo yabo yengqondo;
nokuvimbela izifo ezithathelwanayo, ikakhulukazi phakathi kubhubhane;
ngesikhathi exacerbation ezithile izifo ezingamahlalakhona;
ukunciphisa imiphumela emibi izidakamizwa kanye ukunciphisa ubuthi, kanye ukuthuthukisa umsebenzi obusebenzayo kwesibindi;
ukuze sikhuthaze ukuphulukisa yasha namanxeba;
Lapho ukwelashwa sekudlulile eyinkimbinkimbi cerebral kwegazi neziyaluyalu, isifo sokuqina kwemithambo yegazi kanye nezifo zenhliziyo.
Uma ungawasebenzisi "Kvadevit" ithebhulethi? Yokusetshenziswa ibonisa ukuthi lokhu remedy kungenzeka ingasetshenziswa uma hypersensitivity kuya izingxenye zalo asebenzayo. Ngaphezu kwalokho, izidakamizwa is contraindicated ezinganeni ezingaphansi kweminyaka engu-14.
Izidakamizwa "Kvadevit": isitatimende
Izinkomba izimali abalwe ngenhla.
eziyinkimbinkimbi multivitamin "Kvadevit" kuthathwe ngomlomo ngokushesha ngemva kokudla.
Ukuze kuvikelwe abantu abadala nezingane esukela kwengu-14, kusho enqunyiwe iphilisi elilodwa ngosuku. ezigulini esezikhulile imithi Kunconywa ukuthatha okungenani kabili ngosuku.
Isikhathi prophylactic 1-2 izinyanga.
Ukuze ekwelapheni ukuntula amaminerali namavithamini izidakamizwa letimisiwe ithebhulethi kathathu ngosuku. Inkambo ukwelashwa okunjalo 3-4 amasonto.
Uma kudingeka, kungase kudingeke uphindaphindwe, kodwa ngemva kokuba ikhefu izinyanga ezintathu.
Manje uyazi ukuthi ukusebenzisa eziyinkimbinkimbi multivitamin ngokuthi "Kvadevit".
Yokusetshenziswa kwabesifazane abakhulelwe
Ngenkathi bekhulelwe nangenkathi bencelisa Umuthi isetshenziswa kuphela kuma-oda kadokotela. Ngo senyanga yokuqala akuthathi ezingaphezu kweyodwa ithebhulethi ngosuku, kuyilapho lesibili nelesithathu - akukho amaphilisi angaphezu kuka-lamabili ngelilanga.
Phakathi lactation imithi prophylactic iqondiswa e isamba esisodwa ithebhulethi ngelanga, nokwelapha - kabili ngosuku.
Yini ukusabela ezingezinhle kungenzeka emva ukusetshenziswa "Kvadevit" amaphilisi? Yokusetshenziswa ibika ukuthi imithamo letiphakanyisiwe lokhu ejenti kwamukeleka kahle futhi cishe akalokothi abangele nemiphumela engemihle.
ezimweni ezingajwayelekile kuphela eziyinkimbinkimbi bangase bafake isandla ekuthuthukiseni komzimba nezinto (ukulunywa, isikhumba ububomvu, ukuqubuka kwesikhumba) futhi izinkinga zesisu. Lokhu kudinga ukuqedwa zomuthi.
Ochwepheshe bezifo Vitamin eziyinkimbinkimbi "Kvadevit" yakhelwe ngokuyinhloko ekunakekeleni asebekhulile. It kunomphumela lipid-ukwehlisa, kodwa futhi kunciphisa Inkomba atherogenic. Iziguli bathi izidakamizwa kunciphisa amazinga egazi cholesterol futhi kusiza ukuvimbela ukuguga.
Iziguli uqaphela intengo imali imali uma kuqhathaniswa ngemithi amazwe.
CSKA Stadium esikhathini esidlule futhi esikhathini esizayo
Ifomula Hypoallergenic ngoba nosana: ukubuyekezwa, uhlu lwamagama
Amavithamini e nokunye okufana nokolweni. Indlela ewusizo nokunye okufana nokolweni: Ukwakheka, ukulandelela izakhi kanye amavithamini